Khabar Break - अब हेटौँडामानै छापिन्छ नेपाली रुपैँया !
भानुभक्त आचार्य आर्थिक अभियान,
छाप्ने चेकबुकका लागि करोडौं खर्चेर विदेश पु¥याउँदै आइएकोमा अब त्यस्तो छपाई नेपालमै हुने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मयुरधापमा बन्न लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले नोट छाप्ने छापाखाना उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । यो सँगै नोट, हुलाक टिकट, चेक बुकका साथै अन्य महत्वपूर्ण छपाई नेपालमै हुने भएको हो ।
हेटौंडामा स्थापना गर्न लागिएको दोस्रो औद्योगिक क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको छपाई गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा जग्गा छनोट कार्य सकिएको स्रोतले बताएको छ । केही महीना भित्रै प्रेसको स्थापनाको काम शुरु हुन लागेको सम्बद्ध श्रोतले बताएको छ । पहिलो चरणमा जग्गा छनोट गरेपछि मात्र थप कार्य अगाडि बढाईने बताइएको छ ।
प्रेस स्थापनाका लागि एक सय ५० रोपनी जमिन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष माधव अधिकारीका अनुसार जग्गा छनोट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रेस स्थापना गर्दा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सहज हुने भएकोले सरकारी निकायले हेटौंडाको मयुरधापलाई छनोट गरेको बताइएको छ । नेपालको अन्य औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा हेटौंडा उपयुक्त रहेको बताइन्छ ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीसहित सुरक्षा घेरामा यहाँबाट नोट, हुलाक टिकट तथा बैङ्कको चेकबुक छपाई गरिने छ । हेटौंडाको मयुरधापमा जार्सा कन्सल्ट्याण्टले विस्तृत परियोजना (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । मयुरधापको एक सय ३५ हेक्टर जमिनमा डीपीआरका लागि सर्भेको काम सकिएको छ ।
हेटौंडा बजारबाट ७ किमि दक्षिणमा रहेको साबिक चुरियामाई र पदमपोखरी गाविसको बीचमा पर्ने खहरे क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।